MADAXWEYNE KU XIGEENKA SOMALILAND OO KU HUNGOOBAY XADHIGII SIYAASI MIIGANE OO KA SOO JEEDA DEEGAANKA SAYLAC IYO MAAMUL-GOBOLEED BEESHA CIISE KU DHAWAAQDAY – Xeernews24
MADAXWEYNE KU XIGEENKA SOMALILAND OO KU HUNGOOBAY XADHIGII SIYAASI MIIGANE OO KA SOO JEEDA DEEGAANKA SAYLAC IYO MAAMUL-GOBOLEED BEESHA CIISE KU DHAWAAQDAY
4. September 2017 /in WARAR/NEWS /von admin
Beesha Ciise ma laga yaabaa inay maamul-goboleed sammaystaan?
Madaxweyne Ku Xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici, ayaa ku hungoobay xadhig uu kula kacay siyaasi Maxamed Cilmi Miigane, oo ka soo jeeda Gobolka Salal.
Ka dib markii sida la sheegay Madaxweye Ku Xigeenka Somaliland ku eedeeyay Miigane inuu ka dambeeyay xiisad ka taagnayd Degmada Saylac oo Xildhibaannada Golaha Deegaanku ku doorteen Maayar cusub, balse uu si cad isu hor taagay Saylici.
Maxkamadda Gobolka Hargeysa, ayaa todobaadkii hore xorriyaddiisa u soo ceisay Miigane, oo 21 maalmood markii uu xidhnaa Burco loo soo gudbiyay Saldhiga New Hargeysa ee caasimadda, halkaas oo uu xidhnaa lix maalmood oo kale.
Maxkamadda Gobolka Hargeysa, ayaa markii ay eegtay eedaha loo soo jeediyay Miigane oo salka ku hayay Khiyaamo qaran iyo inuu xogo u gudbiyay Dawladda aynu jaarka nahay ee Djibouti waxaa uu Garsoorihii Maxkamaddu ka dalbaday CID-du inay hayaan wax caddayn ah oo eedahooda la xidhiidha, haseyeeshee markii la waayay wax caddayn ah ayay Maxkammaddu Xoriyaddiis u soo celisay Maxamed Cilmi Miigane oo 27 maalmood xaqdarro ku xidhnaa.
Inkasta oo sharcigu u hiiliyay Siyaasi Maxamed Cilmi Miigane, balse waxaa ilaa haatan kamaqan telefoonnadiisa iyo documentiyo muhiim ah oo ay haystaan ciidammada bilaysku, kuwaas oo shuruud uga dhigay inuu keeno cid kafiil ka ah isaga.
Tabashadii Reer Saylac ee Saami-qaybsiga Xukuumadda ma waxaa loogu daray ugaadhsiga Siyaasiyiitooda?
Bulshada Gobolka Salal oo awelba ka arradanaa horumarka ka socda Gobollada kale ee Somaliland, islamarkaana la duudisyay xaqii ay u lahaayeen inay ka muuqdaan boosaska muhiimka ah ee saamiga xukuumadda, ayaa waxaa loogu daray tallaabadan gurracan ee lagu ugaadhsanayo siyaasiyiintooda, gaar ahaan dhacdadan u dambaysay ee lagu xidhay Maxamed Cilmi Miigane.
Gobolka Salal waxay xukuumadda ku leeyihiin laba boos oo magac u yaal ah, kuwaas oo kala ah Wasiirka Ciyaaraha oo shaqadiisu fadhiid tahay iyo Wasiiru-dawlaha Wasaaradda Diinta iyo Aw-qaafta. Labadan Masuul ee cad-quudheedka qaatayna maaha kuwo metela bulshada Gobolka Sala loo wax xidhiidh ah la leh, am aka warqaba dhibaatadda xukuumaddu ku hayso Reer Salal.
Haa, dhawaan ayay ahayd markii qurbo-jooga reer Salal ee ku dhaqanLondon ay ku dhawaaqeen maamuul-goboleed cusub oo caasimaddiisu tahay Saylac, taasoo ay sheegeen inay wax laqaybsanayaan cidkasta oo wax u ogol, islamarkaana ka rajodhigeen xukuumadda Somaliland oo dayacday.
Tallaabooyinkan lagu badhtilmaansanayo haldoorka Gobolka Selel waa mid sii fogaynaysa bulshada deegaankaas.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/09/miigane.jpg 371 206 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-09-04 11:15:462017-09-04 11:15:46MADAXWEYNE KU XIGEENKA SOMALILAND OO KU HUNGOOBAY XADHIGII SIYAASI MIIGANE OO KA SOO JEEDA DEEGAANKA SAYLAC IYO MAAMUL-GOBOLEED BEESHA CIISE KU DHAWAAQDAY
Is Qiimo Dilka Dawlada Jabuuti,Qaniinyadda Hargeysa, Qoomamaynta iyo Qiira Oyga... Wax Ka Baro Tirada, Mushaarka Iyo Shaqada Xildhibaannada 6-da Maamul Ee Soo...